अब थपिने निषेधाज्ञा अहिलेको भन्दा खुकुलो, कस्तो हुन्छ 'स्मार्ट लकडाउन' ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार ६, २०७८ आइतबार ७:५३:११ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डाै - मङ्गलवारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गराउने सरकारको तयारी छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) को बैठकले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाएर कोरोना सङ्क्रमण घटाउने रणनीति बनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले यसैअनुसारको तयारी गरेका छन् ।
‘अबको निषेधाज्ञा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र व्यवस्थित खालको हुन्छ’ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले उज्यालोसँग भन्नुभयो, ‘अब निषेधाज्ञा थपिँदा अहिलेको भन्दा खुकुलो बनाउने सोच छ । नागरिकले मेरै लागि हो भनेर अपनत्व महसुस गर्ने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गर्ने र आफ्नो दैनिक काम गर्न सक्ने गरी निषेधाज्ञाका प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’
सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार कार्य र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी बनाउने प्रावधानलाई ‘स्मार्ट लकडाउन’ भन्ने बुझिए पनि सीसीएमसीमा छलफल भएको यो विषयबारे सरकारी निकायहरु नै बेखबर छन् । तर पनि अब थपिने निषेधाज्ञामा आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै सञ्चालन गर्न दिने र जनजीवन सहज बनाउँदै लैजाने तयारी छ । तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा भने कडाइ गरिने छ ।
अहिले बिहान ११ बजेसम्म फलफूल तथा खाद्यान्न पसल खुलेका छन् । यसलाई ९ बजेसम्म या ११ बजेसम्म नै निरन्तर खुलाउने र ११ बजेपछि अरु पसलहरु खुलाइने तयारी छ । निषेधाज्ञाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी त्यसपछि अहिले ठप्प रहेका केही क्षेत्रहरु खुला हुनेछन् । ती खुल्ने क्षेत्रको पहिचान र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छलफलकै क्रममा छ ।
हाेमडेलिभरी तथा अनलाइन सपिङलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जुनसुकै क्षेत्र खुले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने सर्त कायम रहनेछ । अहिले सबैले पालना गर्दै आएको मास्क लगाउने, भीडभाड नगर्ने तथा दूरी कायम गर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता न्यूनतम जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष झण्डै चार महिना लामो लकडाउन भएको थियो । त्यसपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै सङ्क्रमण न्यूनीकरणको प्रयास हुँदै आएको थियो ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्लासहित विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा सोमवारदेखि सकिँदैछ । पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र ग्यासका पसल बिहान समय तोकेर खोल्न यसअघि दिइएको छ । यसै गरी गाडी मर्मतका लागि वर्कसपहरु स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर खोल्न दिइएको छ । निजी तथा सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न यसअघि नै खुला गरिएको थियो ।
June 20, 2021, 10:38 a.m.
यसरी समय तोकेर लक्डाउन खुलाउनु हुदैन / यसो गर्दा तोकिएको समय भित्र सेवा लिने मानिसको भिडभाड हुन्छ र संक्रमण झन् फैलिन्छ | बरु पसल हरु 24 सै घण्टा खुलाएर भिडभाड काम गर्नु पर्छ / तर यहाका ठुला बडा मानिसले यो कुरा बुझ्दैनन् के गर्नु हरे ....
June 20, 2021, 9:54 a.m.
What about educational sectors ? School/college will be open or not?
June 20, 2021, 11:33 a.m.
अनलाइन क्लास हुनेछ /
June 20, 2021, 9:53 a.m.
लकडाउन खुकुलो पार्नु भनेको त ठिक हो तर अलिकति चित्त नबुझेको कुरा ! नेपाल सरकार ले कर उठाउन मात्र अहिले लकडाउन खुकुलो पारेको होकी भन्ने म मात्र होईन सारा नेपाली जनताको मनमा छ । यस्ताे विपतको परिस्थितिमा सरकारले नेपाली जनताको मर्म र पीडा बुझोस् भन्ने भनाई छ । सारा नेपाली जनता भोक मेटाउन लाई पनि हम्मे हम्मे परेको बेला सरकारलाई कसरी कर तिर्न सक्छ ?? सरकारले नेपाली जनता को गाँस बाँस को जिम्मा लिए त वर्ष भरी लकडाउन गर्दा पनि हामी जनतालाई फरक नपर्ला कि भन्ने मेरो भनाई रहेको छ । केही गलत बोलेको भए क्षमा चाहन्छु।।
June 20, 2021, 10:48 a.m.
म तपाइँसंग सहमत छु /